Umthandazo wokuba uhlawulwe imali. ? Ukuhlawulwa namhlanje!
Umthandazo wokuba ufumane imali Njengesixhobo sokomoya esinokusisebenzisa nanini na xa siyifuna, kubaluleke kakhulu kuba uncedo lokomoya ukuze sihlale sinobudlelwane obuhle nabahlobo kunye nosapho luyimfuneko, ngakumbi xa kukho imicimbi yezemali ebandakanyekayo.
Ukuboleka imali kumntu othile kufuna ukuba athembeke yiyo loo nto kufuneka enesikhokelo sokomoya sokuba enze izigqibo zethu zemali kakuhle ukuze kuqinisekiswe ukuba ishishini liza kuba kwimeko elungileyo nokuba ubuhlobo abuyi konakaliswa.
Imithandazo inokuba sisixhobo esiyimfihlo kodwa esinamandla okuphuma kwiimeko ezinzima okanye ezo ngxaki sicinga ukuba zinzima kakhulu ukuba zingashiywa zingenangozi.
1 Ukuthandazela ukuba imali ihlawulwe Yintoni?
2 1) Umthandazo wokubuyisa imali ebolekwe
3 2) Umthandazo wokuba uhlawulwe
4 3) Umthandazo ofanelekileyo wokuqokelela imali
4.1 Ngaba lo mthandazo kufuneka ubhatelwe yimali enamandla ngokwenene?
Ukuthandazela ukuba imali ihlawulwe Yintoni?
Ngalesi sivakalisi isizathu sicace gca kodwa hayi kuphela hlawula imali kodwa ukuze oku kucinywe ngokuzithandela nangaphandle kwesidingo sokungena kwiingxaki ezinkulu nomnye umntu. Isetyenziselwa ngamanye amaxesha xa imeko iye ibe ngathandabuzekiyo.
Ayipheleli kwimeko yemali mboleko kodwa xa silinde intlawulo yomsebenzi wethu okanye enye into.
Ezo ntlawulo zabasebenzi ezisala njengabanjwa, sinokubakhulula ngokwenza lo mthandazo unamandla.
1) Umthandazo wokubuyisa imali ebolekwe
Senhor, meu pai, wena unamandla onke, okokuqala, ndiyabulela ngeentsikelelo ondinike zona imihla ngemihla, ubomi be-peel, i-peel saúde, iinwele zokutya kunye neenwele ezinxibileyo;
Ndisondele kuwe njengo-filho teu kwaye ngokuthobeka I-Peço ukuba le meko iyandihlupha, uyandinceda (kuyathethwa okanye kulungile nakanjani na da pessoa) Ndibhatale okanye i-dinheiro ukuba eu de boa ukholo kunye nesisa lhe.
Ukuqonda rhoqo kwaye usazi ukuba kusoloko kuyimfuneko ukunceda iNossos irmãos em Halições precárias, ndikunqwenela ukuba ukhulule umxholo wakho we-coração e seu espírito ukuze uphinde ugcwalise kwaye undibhatale le dinheiro endiyifunayo ukuze ndiqhubeke nobomi obunesidima, nobekekileyo ukukwazi ukuqhubeka nokundinceda i-semelhantes, i-assim mesmo ukuze bakwazi ukulandela i-desígnios zabo.
I-Tudo isso eu te peço em nome ngu-Deus pai, Deus filho no Deus Espírito Santo.
Kubalulekile ukuthandaza lo mthandazo ukuze bahlawule imali ngokholo.
Amathuba eshishini ahlala ehamba kunye neemeko ezinzima.
Sikwindawo apho ukufuna inzuzo yakho kubonakala kuyinjini yezona zininzi, amaxesha amaninzi abantu bacela iimali mboleko zemali ukuze bathathe umngcipheko kumashishini angahlali ehamba kakuhle kwaye baphela bezithathela ityala elininzi kunye neengxaki
Kwezi meko apho sidinga imali ebanjiweyo ukuba ibuyiselwe kuthi, sinokuguqukela kwesi sixhobo sinamandla ngokuqinisekileyo esiya kuyibona impendulo ngexesha elincinci kunokuba sicinga.
2) Umthandazo wokuba uhlawulwe
Usomandla kwaye unenceba uThixo, owathi ngobungcwele bakho wangcwalisa uJosé Gregorio de la Rivera, owamiselwa kwangaphambili ngumfeli-nkolo osuka embindini weGolgotha ​​...
Ke iqinisekiswe yiVatican ukuba ibe ngumgcini wezinto ezizinikeleyo, umlondolozi wemali yazo, izinto zazo ezinqabileyo kunye namatye enethamsanqa, ngesipho sokubenza basibhatale imali abasityala yona. Ndiyazi imfanelo otyaleke ngayo imali, ndiza kuwe ukukubuza ...
(Yenza isicelo sakho) Ndincede, uJosé Gregorio de la Rivera.
Ndincede ukufikelela kwiNkosi into endiyicelayo kulo mthandazo imbeko enkulu kunye nozuko lwakho kunye nokuzuzisa umphefumlo wam. Nceda u-San José Gregorio enze igama lakho laziwe kwaye enze abalandeli abaninzi bezizathu zakho.
Yonke into ondenzela okuhle, ndiyathembisa ukuba uza kuyenzela nabanye. Ndizokuhambela iicawe ezisixhenxe ndithandaze kwiindumiso owazibonakalisayo. Andinqweneli mntu kakubi, kodwa unokubuyisa ityala lam.
Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele.
Mariya Oyingcwele, sikhusele.
Ngalo mthandazo wokundibhatala kunye nokufumana imali endibolekileyo siya kukhupha imali ebibekelwe thina phantsi kwazo naziphi na iimeko.
Kwimimandla yasezulwini amabango abalulekileyo ayaliwa kwaye indawo yezemali yenye yezona ngxaki zinobuntu umntu kuba zibandakanya iimfuno zomzimba, ubudlelwane bobuqu kunye neemeko ezithile ezinokuthi zithathwe njengezinzima.
3) Umthandazo ofanelekileyo wokuqokelela imali
Namhlanje ndivakalisa lo mthandazo usezulwini ngenxa yakho
Ndincede kwezi yure ezingapheliyo
Andifumananga oko ndikunqwenelayo;
Namhlanje, ngaphandle kokuziphatha kakuhle,
Ndijikel 'umva and andikwazi kuphola
Imali endibanjelwe yona.
Ngale nto, Yise wasezulwini, ndiza kuwe
Ukuze undikhulule kolu lonwabo
Yenza umntu endimncedileyo
Ngexesha lakho Gcina ilizwi lakho kunye nam
Sombulula ityala esivumelene ngalo kudala.
Nguwe kuphela onokwenza ukuba ndiphumelele
Ukusuka kolu dibana, ukusukela ibhalansi ye Ubulungisa
Utsho esame kum.
Ndicela ukuba uthathe inxaxheba emphefumlweni, kwisazela nangokuziphatha
Kweso sifundo naleso, siqhutywa yimicu yakho, yena
Ndihlawule imali ebibolekiwe ngaphandle kwam
Yintoni yokunyanzelisa ngakumbi kuyo.
Ndishiya esi sicelo kwintando yakho engcwele kwaye ndiyathemba
Ndiphe into endiyicelayo.
Ukuphatha ingqokelela akuyona into elula. Kufuneka sizazi iimfuno wommelwane wethu ngexesha lokufuna ukuqondwa kwentlawulo okanye ixabiso elithile ebelivunyelwe ngaphambili.
Lo mthandazo usebenzayo wokuqokelela imali, ukongeza ukusinceda ukuba senze inkqubo ukuba ube yingenelo, uya kusizalisa ngobulumko bokusebenzisa amagama afanelekileyo ngexesha lokutshaja.
Ukongeza kuyo yonke le nto, khumbula ukuba ilizwi likaThixo lisibiza ukuba singayenzi into esingayithandiyo ukuba yenziwe, ngumgaqo owaziwa ngokuba ngumgaqo wegolide kwaye ekufuneka sikhumbule ngaphezulu kwalo lonke olu hlobo iyasebenza. Lo kunye nawo nawuphi na omnye umthandazo esinokuwenza uya kusenza sizive sisondele kakhulu kwiNkosi kwaye oko kuyakusigcwalisela ubuntu kunye noluntu ngexesha lokwenza ingqokelela.
Ngaba lo mthandazo kufuneka ubhatelwe yimali enamandla ngokwenene?
Ngoko ke ngumthandazo inamandla into ekufuneka uyenzile kukukholelwa okusuka entliziyweni kuba le kuphela kwento ebeceliwe ukususela ekuqaleni kokudalwa komhlaba ukuze Imithandazo iyasebenza kwaye inamandla Indalo yadalwa ngamazwi kwaye yiyo loo nto kufuneka senze izicelo zethu ezivela emphefumlweni kodwa sinoxanduva oluninzi kwaye siyayazi le nto siyicelayo, bayawa ekuzingca, behlala becinga ngamanye amadoda phambi kwethu. Kuyafana okanye izibonelelo zethu.
Ukuba sikwenza oku ngokuqinisekileyo imithandazo esiyenzayo inamandla amakhulu ngaphandle kwesidingo sokukhanyisa amakhandlela okanye silungiselele iimeko ezizodwa zomthandazo.
Yenza awona mandla makhulu omthandazo. Ke bakunika imali.